बाल अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम
फागुन २६ पर्वत । कुस्मा नगरपालिका वडा नं ७ को आयोजनामा एक दिने बाल अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएको छ । कुस्मा नगरपालिका वडा नं ७ लाई बालमैत्री वडा बनाउने उद्देश्यले बालबालिका र सरोकारवालका लागि एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बालक्लव गठन प्रक्रिया, सञ्चालन तथा क्षमता विकास सम्बन्धी बिषयमा अभिमुखीकरण दिइएको थियो । वडा नं ७ लाई बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने वडाको रुपमा पहिचान गराउन तथा कुश्मा नगरपालिकालाई नेपालको दोस्रो तथा ४ नं. प्रदेशको पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन सहितको नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको वडा अध्यक्ष सुवासचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बालभेला सञ्चालन तथा विकास, बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा तथा यससँग सम्बन्धित सूचकहरु आदिका वारेमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रम समापनमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर वि.पौडेलले बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्नको लागि आवस्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता जाहेर गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा अभियानको रुपमा निरन्तर लाग्नको लागि सरोकारवलाहरु सबैलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कुश्मा नगर कार्यपालिकाका सदस्य डम्वरबहादुर नेपाली, बिद्यार्थी युवराज क्षेत्री, शिक्षकको तर्फबाट मिनबहादुर थापाले समेत बोल्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण जिससका सामाजिक विकास अधिकृत लिलाधर सुवेदी र मोदी गाउँपालिका वडा नं.ंं ८ चित्रेका बालमैत्री शिक्षक मधुसोधन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत तथा धन्यवाद मन्तव्य कार्यक्रम संयोजक तथा वडा सदस्य श्री परशुराम पुरीले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन वडा सचिव विन्दु शर्मा रेग्मीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा वडाका जनप्रतिनिधिहरु, कुश्मास्थित सामुदायिक तथा संस्थागत गरी ११ वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरु, ई.सि.डि.कक्षाका शिक्षीकाहरु वडा नं. ७ अन्तर्गतका विद्यालयका प्र.अ.हरु, वडाका महिला स्वयंसेविकाहरु, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु सहित ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।